मलाई आरोप लगाउनेहरुले जेल जाने तयारी गरे हुन्छ – केशव स्थापित
Monday,5Nov, 2018 2:13 PM
प्रदेशसभाको मन्त्री बनेको नौ महिनापछि केशव स्थापित पदबाट हटाइए । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीबाट बर्खास्त भएका स्थापित प्रदेश संरचना बनेपछिको बर्खास्ती हुनेमा पहिलो नम्बरमा पर्छन् । प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले कार्यसम्पादन राम्रो गर्न नसकेको भन्दै शुक्रबार उनलाई हटाए । साथै ट्वीटरबाट चलेको ‘मि टु’ अभियानको पहिलो विवादित व्यक्ति पनि हुन स्थापित । मन्त्रीपदबाट अपदस्थ र ‘मि टु’ अभियानमा जोडिएको उनको विवादित बिषयमा केन्द्रित रहेर चक्रपथ डटकमका लागि कविता अधिकारीले गरेको संवाद ः
३ नम्बर प्रदेशको मन्त्रीबाट बर्खास्त हुनुभयो । खासमा भएको के हो ?
हामीबीच ‘इगो’ भयो । त्यसलाई फेरि इगो पनि नभनौ उहाँले सहन नसकेको हो । के भयो भने उहाँ पनि मुख्यन्त्रीको दाबेदार म पनि दाबेदार नै थिए । पछि फाइनल मिटिङ्ग मुख्यमन्त्री हुनुभन्दा एकरात अगाडि तपाई मन्त्री बन्नुस एक डेढबर्ष चलाउनुस्,त्यसपछि केशवलाई हयान्डओभर गर्नुस् भनेर साथीहरुले भन्नुभएको थियो । तर मैले त्यो कतै उल्लेख गरिन । तर अव त बोल्न मिल्यो नी हैन ? यता समय बढ्दै गयो, मैले यातायातमा नयाँ ऐन ल्याए, उर्जामा नयाँ कुरा ल्याएँ । सडक पुल यता उता सबै तिर मेरो काम थियो । यो आउने हप्ता साढे चार अर्बको टेन्डर निस्कने थियो ।
डोरमणीलाई ‘टि ओ आर’ ‘इ आइ ए’ ‘आर एफ पि’ भनेकै थाहा छैन । मेरो सबै काम भइरहेको थियो अहिले मेरो कर्मचारी त आएको दशैंको अगाडि मात्रै त हो नी । संगठनको एकहप्ता अगाडि मात्रै टुंगो लागेको हो । अझैपनि कर्मचारी जिल्लामा पुगेकै छैन । कर्मचारीबिना नै त्यतिका काम भइरहेको छ ।
मैले अपदस्थ गर्न खोज्यो भनेर कसैले उसलाइ सुनाएछ । अनि मैले भने ‘ए कमरेड तपाई बुढो मान्छे पाँचबर्ष नै बस्नुस्, म त्यस्तो लोभी मान्छे हैन भनेपछि अलि उज्यालो भयो ।’ अनि फेरि तपाई गाँउ गाँउ डुलेर हिड्ने योजना बाँड्ने सबैलाइ आफ्नो मान्छे बनाउने । म भन्दा अगाडि अनि बिडियस फाउन्डेसमा जाने सबै ठूला मान्छेलाई भेट्ने मलाई किन नराखेको भन्यो ।
अनि फेरि ‘जेरो पर्फमेन्स’ भन्छ । अनि मैले भने २७ अर्ब जतिको कार्यक्रम हुदै थियोे । फेजबाइज पहिलो फेज साढे चार अर्बको एउटा मात्रै पूर्वाधारको टुंगो लगाइसकेको थिए । अर्को ५० करोडको पनि थियो । यसरी हेर्दा मैले टेण्डरमै जाने ७ वटा थियो । अनि खर्च हुने २ अर्बको थियो । त्यो दुइबर्ष तिनबर्षको काम थियो । तर टेण्डरमा जादा अलि ढिलो हुने भयो । तर मेरो बजेट त टँुगिएको थियो । १३ अर्ब भनेको मलाई त यत्रो पापड जतिको पनि लाग्दैनथ्यो । उसलाई पो ठुलो भयो त ? उहाँलाई म देखी डर भयो । समय डेढबर्ष बितिसकेको थियो । पटक पटक तपाई नै हो पाँचबर्ष भन्दै आएको थिएँ ।
सोमबार मेरो चीन जाने कार्यक्रम थियो । अनि मैले भने कमरेड मेरो चिन जानुपर्ने, भिषा लिन जानु छ । क्याविनेटको मिटिङ्गमा बस्न भ्याउदिन भने । क्याविनेटमा आउनै पर्छ भन्यो, मैले भने मेरो केही काम नै छैन भनेको बहुला जस्तो गरेर कराउन थाल्यो । अनि फेरि ‘काम नलाग्ने भन्यो’ । अनि मलाई पनि झनक्क रिस उठयो । ‘उ त्यो खाम हेरौ त्यो साढे चार अर्बको छ, यो छ, त्यो छ मलाई पैसा पुगेन’ भने मुख्यमन्त्री भएर कामसाम ल्याउनु छैन भने । अनि फेरि काम नलाग्ने भन्यो । अनि फेरि मैले भने तपाईको २० करोडको काम आज आएर कार्यविधि ल्याउदै हुनुहुन्छ ।
२० करोडका लागि कार्यविधि भर्खर आउदैछ । मेरो १३ अर्बको लागि तपाइले निहुँ खोज्ने यो तरिका हो ? तपाइले संगठन कहिले दिनुभयोे ? दशैंभन्दा अगाडि कर्मचारी अहिलेसम्म मैले पाएको छैन । त्यो तपाइले ल्याइ दिन पदैन भने । अनि फेरि यसरी बोल्ने हैन भन्यो । अनि मैले मेरो स्वर नै यस्तै छ । किन तपाई दलाई लामा हो ? हेटांैडाभन्दा माथिको कुरै गर्न नजान्ने मान्छे, हेटौडाभन्दा माथिको बुद्धि छैन । पाँचबर्ष बोक्छु भन्दा काँधमा हग्ने ? भन्या हो ।
सहमति भंग हुन्छ भनेको के हो ?
राजनीतिक सहमति भनेको एकले धोका दियो भने मैले उसलाई सधै काँधमा बोकिरहन पर्छ भने छैन । हटाउछौं भने हटाऔ भन्ने हो । त्यसपछि जे हुन्छ, हुन्छ । अनि उहाँले डयांग डयांग गर्नुभयो । अनि मैले पनि भने ।
मन्त्रीले मर्यादाको ख्याल नगर्ने, जे पायो त्यो बोल्ने हो त ?
म संग प्रमाण छ । सचिव नै चार जना त सुन्ने छन । त्यो बुढालाई म साथी बनाउने मान्छे हैन । जिल्लाभरि घुमेर सम्वन्ध बनाउने म । योजना सबै मैले ड्राइभ गर्ने, सबै म अनि मेरै पर्फमेन्स जिरो रे । रिसोर्स खोजिदिने सबै काम गरे । मेरो २७ अर्बको डयांग की डयांग काम आउने भयो । अनि गेडा पाक्ने बेलामा त म सफल हुने भए, अनि अहिले अपदस्थ गरियो ।
विस्थापित हुने कुरा कति खेर थाहा भयो ?
अहिलेसम्म पनि थाहा छैन । मिडियाले भनेर हो की भन्ने ठानेको छु । मसँग त भन्ने साहस हुन पर्यो नी । मिडियामा अन्तरवार्ता दिदैं हिडिरहेका छन । तर मलाई पहिला भन्न पर्यो नी तपाइलाई यसरी हटाइयो भनेर । न फोन गरेका छन्, न इमेलमा भनेका छन् । सिधा आँखा जुधाएर भन्ने त आँट हुन पर्यो नी, फटाहा कुरा गरेर हुन्छ ? बर्खास्त सबैले हल्ला गरेर भनेपछि मानिदिएको हुँ । अन्तरवार्तामा मैले कुर्सि बोकेर झण्डै कुट्न आयो भनेर भनेछ, झुट बोलिरहेका छन । झुटको पनि सिमा हुन्छ नी । यो उमेरमा झुट बोल्न कसरी सक्छ ? बिचरा भयको डरले जे पायो, त्यो बोल्दै हिडिरहेका छन् ।
अव मन्त्री स्थापित होइन, प्रदेशसभा सदस्य स्थापित, हैन त ?
उहाँको राजनीति सकियो अब । कसरी भनेर नभनौं तर मलाई चार्ज लगाएपछि उहाँको राजनीति सकियो । मैले १० पल्ट भने गर्न मिल्दैन, यो गैरसवैंधानिक हो । साम्राज्यको केन्द्र भागमा गएर मुख मिठो गर्ने र सपान गर्ने त्यो साम्राज्यवादको केन्द्र हो । त्यही बिरुद्ध त मैले गर्नहँुदैन भन्दा भन्दै उसले नगर्नुपर्ने काम गरिरहेको छ । अनि त्यसैमा त हाम्रो चर्काचर्की पर्न थालेको हो नी । मलाई ननिकाले सम्म त मैले भन्न मिल्दैनथ्योे तर अब म पदबाट बाहिर आएपछि बोल्न मिल्छ ।
उहाँ अहिले साम्राज्यहरुका लागि काम गरिरहेको छ । गोप्य ढंगले हाम्रो मन्त्रिपरिषद्लाई त्यो कुरा थाहा छैन । हाम्रो मन्त्रालयले जानकारी लिने ठाँउमा जानकारी छैन । उहाँहरुचाँही अवधारणा पत्र बनाउने । यो यो प्रदेशभरिको १५ बर्षे कार्यक्रम बनाउने भिजन बनाउन गइरहेको छ । कस्ले फण्डिङ्ग गरेको हो, त्यो हामीलाइ थाहा थिएन ।
हिजो तपाई त्यही सँगै काम गर्दा बोल्नुभएन, अहिले अपदस्थ भएपछि बोल्नु झन नियोजित भएन र ?
हैन, त्यो त मेरो मर्यादा थियो नी । म हिजो मन्त्री भएर भन्न मिल्ने थिएन नी । आज त म मुक्त भए नी । उहाँको राजनीति सकियो ।
राजनीति त तपाईको सकिदैंछ त, कसरी सकियो उहाँको राजनीति ?
अस्ति पो मैले ए कामरेड यस्तो नगरौं भनेर ढाकछोप गरे । अब त म पार्टी अध्यक्षलाइ भन्छुु नी, भन्दिन र ? त्यसपछि त सकियो उनको राजनीति । पार्टी जोगाउनका लागि पनि उहाँको अनैतिक ढंगको कार्य मैले बाहिर ल्याउनुपर्छ । साम्रज्यवादीहरुले चलाएको अभियानको उहाँ अहिले संयोजक हो । हामीलाइ खबर नै नगरी अर्थमन्त्रालयमा नभनी परराष्ट्रबाट सहमति लिनुपर्ने त्यो पनि नलिई अराजक ढंगले अरुदेशमात्र हैन महादेशको खुशीका लागि डोरमणि काम गरिरहेका छन् । सिधै भन्ने हो भने ‘सिआइए’का लागि डोरमणिले काम गरिरहेका छन । सिआइएको सिधै इन्डियासँग गाँभिएर काम गरिरहेका छन । त्यसको जानकारी कसैलाइ छैन । अनि यसो नगर भनेपछि म अवधारणा पत्र बनाउदै छु भन्ने । अनि मैले के को अवधारणा, अर्काको धारणाले प्रदेश चल्न दिन्छु ? भन्यो भने त्यही तनाव हुन्थ्यो । उहाँले साम्राज्यवादको योजना ल्याउने, मैले निरन्तर बिरोध गरे । त्यसमा ‘रअ’ का एजेण्ट पनि छन । अनि उनीहरुलाई हाम्रो १५ बर्षे माष्टर प्लान बनाउने जिम्मा दिन सकिन्छ ?
‘रअ’ सँग मिलेर डोरमणिले काम गरिरहनुभएको छ भन्नुभयो, त्यसको प्रमाण छ तपाईसँग ?
संस्थै छ भन्या । आज नुवाकोटतिर काम गरिरहेको होला । स्थानीय तहमा गएर हाम्रो यो प्रदेशको कार्यक्रम भन्दै कसले चलाइरहेको छ ? हामीलाई थाहा छैन । अब २० गते काठमाडौं उपत्यकाको स्थानीय तहको मानिस ल्याएर गर्ने भनिएको छ । मुख्यमन्त्री त्यहाँ गएर गजधम्म बस्ने हाँस्ने कसको पैसाले चलिरहेको छ ? अमेरिकन डलर ? आएको बसेको खाएको सबै पैसा कसले दिइरहेको छ ? कसले फण्डिङ्ग गरिरहेको छ । त्यो सिआइए नै हो । अनि सिआइएको एजेन्ट बन्ने अनि म जत्तिको मानिसलाइ प्रहार गर्ने चार दिन पनि टिक्दैन, उडाइदिन्छु म ।
तपाइलाई हावादारी कुरा बढि गर्ने, काम कम गर्ने नेता पनि भन्छन । जहाँ स्थापित त्यहाँ कन्टोभर्सी भन्छन् नी ?
के हावादारी ? यो काठमाडौमा जे जे विकास भएका छन्, यो सबै मैले गरेको हो । मैले नै गरेर रत्नपार्क, भक्तपुर बसपार्क बनाएको हो । तपाई जहाँ हेर्नु न, सबै मैले नै गरेको हो । म त विश्वमा ५ जना मेयरको प्रतिस्पर्धाको लिष्टमा पर्ने मान्छेलाई इष्र्याले पनि भनिहाल्छन नी, हावादारी मानिस भनेर ।
केशव स्थापित कही पनि टिक्न नसक्ने नेता हो । अव राजनीतिक क्यारियर झन ओरालो लाग्यो भन्छन नी ?
किन टिक्न नसक्नु नी । २७ अर्बको मेरो योजना थियो, अन्य हजारौ काम थियो । मैले मेयरको दाबी गरेको थिएँ । मेयर पाएन केही समय पछि मन्त्री भयो । अब मन्त्रीमै बसिरहने हो भने मन्त्रीमै बस्ने हो ५ बर्ष । मन्त्रीबाट अपदस्थ गरेपछि त अब अर्को द्धार त खुल्यो होला । कुखुरा समाएर बस्यो भने त कुखुरै भयो नी, अर्को अब कुखुरा उडाएपछि त अव कालिज पाइन्छ की ? त्यो त प्राप्तिका लागि त छोडनु पर्छ ।
तर तपाईलाई त हटाइएको हो नी ?
छोडाएपछि त मैले छोडे नी । जनतालाई केन्द्रमा राख्ने, राष्ट्रलाई केन्द्रमा राख्ने र पार्टीलाई केन्द्रमा राख्ने हो । अब आफु छ कि छैन, के मतलब ?
तपाईको ‘मि टु’ अभियानमा नाम जोडिएको छ । यसले पनि तपाइलाई असर गरेको हो ? यो के हो ?
यो अभियान सभियान केही पनि हैन । अब उ त्यहाँ बाटोमा आउने मानिसले फलानोसँग मैले यौन सम्पर्क गरे फलानोसँग मेरो भेजाइनाको स्वाप जाँची पाउँ, उहाँको रक्तको डिएन गर्नपाउँ भन्यो भने उहाँको रगत जाँच्न जाने हो ? त्यो त सबैभन्दा ठूलोसँग गाँसिन पाउन भनेर पनि भनेको हुन सक्छ नी । यसले मेरो बदनाम हैन, उहाँहरुकै बदनाम भएको छ । तर म उहाँहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने उहाँहरुले जेल हेर्नुभएको छैन होला । पहिला जेल हेर्न जाउ भन्छु । एउटा त विदेशमा रहेछ, एउटा यहाँ हुनेलाई मैले जेल हेर्न जाउ जेलको तयारी गरे हुन्छ । सि इज बुक्ड । ।
किन तपाईले उनीहरुलाई जेल पठाउँदै हुनुहुन्छ ?
अदालते पठाउँछ नी । अहिले त तिहार आएको छ । दिदीबहिनी दाजुभाइको चाड भनेर चाड मनाउन दिएको हो । कुकुरले तिहार मनाउने समयमा रश्मिलाको तिहार बिगार्न मिल्छ मैले ? अब उहाँ जेल जाने, अहिले देखि नै तयारी गर्न पर्यो । डसना ससना सिलाउने कि के गर्ने हो, त्यसको तयारीमा लाग्नुस भन्छु । यहाँ उहाँ भन्ने नै छैन । म सँग जिस्कन आएपछि त्यसै त छोड्न मिलेन नी ।
तपाईको कारणले जागिरबाट हट्नु पर्यो । हिंसा भयोे भन्ने आरोप छ । यसमा जेल उहाँ जाने कि तपाई ?
मैले त्यो महिलालाई एकदुइ पटक देख्या हो । मेरो मातहतमा केही समय काम गरेको हो । पछि कहाकहाँ काम गर्यो मलाइ थाहा भएन । उनी बिभागीय प्रमुख मेरै समयमा भएको भन्ने कुरा छ । त्यो पनि मलाई थाहा थिएन । पछि थाहा भयो । कुचिकारहरुले उसलाई र कार्यकारीलाइ राजिनामा गराउने भनेर चारदिन काठमाडौमा फोहोर थुपारेको, पछि एउटा सम्झौता भयो । त्यसमा फुकुवा भयो । त्यहा क्लियरली भनिएको छ कि पहिलो बुँदामा रस्मिला प्रजापतिले अभद्र व्यवहार गरेको कारणले गर्दा निजलाई कसुरको मात्रा हेरी त्यसै अनुसार कारवाही गर्ने र लिखित रुपमा माफी गर्न लगाउने भन्ने । कुचोले कुटेर कुचिकारले माफ माग भन्दा पनि माग्नु भएन । कार्यकारी अधिकृत शिबभक्त शर्मालाई कालोमोसो दल्ने भन्दा खेरी पुलिस प्रोटेक्सनमा गाडी छोडेर उहाँ गएपछि त्यो कहिल्यै फर्किएर आएन । त्यसपछि अर्को कार्यकारी आउन पर्यो । ठूलो आन्दोलन भएको थियो ।
मि टु अभियानमा नाम जोडिदा राजनीतिमा चाहि कत्तिको असर पुगेको छ ?
केही पनि परेको त छैन । तर हुदै नभएको आरोप लगायो । यत्रो राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय चर्चा बनाइदियो सबैलाइ धन्यवाद । म बीचमा केही काम भएन भन्ने थियो, चर्चामा ल्याइदियो । मि टु भन्दै उ मात्रै हैन, केही मिडियाका मानिस पनि लाइन लागेर जान्छन् । जसले उसलाइ सपोर्ट गरिरहेको छ । कसैले लेख लेखेको छ । तिनीहरुलाइ पनि म छोड्दिन । मलाई बदनाम गरेर उसले के पाउने हो र फल्ड गर्ने ? ती लेखिकाले कि सार्वजनिक रुपमा माफी माग्नुपर्छ हैन भने तिनलाई पनि म कठघरामा लग्छु । तिनीहरु कहाँबाट सञ्चालित छन् त्यो त भन्न परयो नी ? मैले केही गर्ने हैन, सबै कानुनले गर्छ । म कानुनमा जाने मात्र हैन तिनीहरु जेल जान्छन् । मलाइ थाहा छ म पनि कानुनको विद्यार्थी हँु । म पनि यतिको अनुभव सिद्ध मानिस हँु । कसैलाई विना कारण यसरी प्रयोग गर्छ भने उनीहरुले त्यसको मुल्य चुकाउनपर्छ । म किन छोडछु । नसमाएको मानिसले समायो भन्छ भने म छोड्छु । कागको तिहार, कुकुरको, गाईको र गोरुको तिहार मनाउने समयमा दिदीबहिनीको तिहार किन खोस्नु भनेर बसेको मात्रै हो ।